Mihevitra ny hanamafy kokoa ny famerana fividianana karatra SIM amin’ny finday i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Desambra 2015 5:44 GMT
Nohasarotin'ny manampahefana rosiana ny fividianana karatra SIM amin'ny finday tsy misy fisoratana anarana. Sary avy amin'ny Pixabay.
Mety mbola hihasarotra kokoa ny fividianana karatra SIM amin'ny finday ao Rosia, na dia efa tsy ara-dalàna mety handoavana onitra aza ny fanaovana izany tsy misy fisoratana anarana. Nieritreritra ny fanovanam-pamerana ny fividianana fehezam-pinday noho ny “fitomboan'ny fandrahonan'ny mpampihorohoro” ho antony voalohany ny manampahefana rosiana.
Ny fandraisana andraikitra voalohany dia niainga avy amin'ny komity iraisan'ny departemanta miady amin'ny extremisma ary heverina ho mikendry ireo vahiny te-hividy karatra SIM finday ao amin'ny tany Rosiana aloha voalohany, izay miteraka fahasahiranana bebe kokoa ho azy ireny. Nitatitra ny gazetim-pandraharahana Rosiana mivoaka isan'andro Kommersant fa nohamafisin'ireo orinasa rodiana mpanome tolotra ara-pifandraisana am-pinday sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy fa ampiharina hamerana mafy kokoa ny fivarotana karatra SIM ny lalàna rosiana.
Nanolo-kevitra ny hanitsiana ny lalàna misy ankehitriny hamerana ny fifanarahana fampiasana ny tolotra ara-pinday amin'ny vahiny ao Rosia ny Vondro-kery manokana miady amin'ny extremisma. Ny tolotra ifanarahana, araka ny volavola, dia tokony hoferana hatreo amin'ny andro farany azon'ilay vahiny ipetrahana eo amin'ny firenena ary tokony hifarana rehefa mandao an'i Rosia ilay vahiny. Ny fanitarana ny tolotra ifanarahana dia tokony hiankina amin'ny taratasy manamafy fa nahazo alalana hanitatra ny fonenany ao Rosia ilay vahiny.
Tian'ny sampan-draharaha mpampihatra ny lalàna ihany koa ny hamerana ny fividianana tolotra finday mialoha [prépayés] hialana amin'ny fanasoniavana taratasy fifanarahana amin'ireo mpanome tolotra finday, araka ny loharanom-baovaon'ny Kommersant. Hatramin'ny Janoary 2014 i Rosia no nitaky fampisehoana ny kara-panondron'ilay mpividy sy hanasonia taratasim-pifanarahana amin'ny orinasa mpanome tolo-pifandraisana, saingy mbola nisy hatrany ny fahafahana nividy tsy nilaina fisoratana anarana. Ho fampihenana ny famarotana karatra SIM tsy misy fifanarahana voasonia (izay efa mety hahavoasazy mandoa onitra), dia nanolo-kevitra ny hery manokana miady amin'ny extremisma ny hanome alalana ny Roscomnadzor, sampan-draharaha mpanaramaso ny fifandraisana ao Rosia, fahefana hanao fisavana tampoka ireo toera-pivarotana ary hanao fitsapana “miafina” hividy entana hanamarinana raha mifanaraka amin'ny fitsipika sy fandraketana ny karapanondron'ny mpanjifa na tsia ny mpivarotra karatra SIM.
Nilaza tamin'ny gazety ny loharanom-baovaon'ny Kommersant fa mifandraika amin'ny “fandrahonan'ny mpampihorohoro” ny volavolam-panovana, na dia tsy nanamarika toe-javatra mivaingana aza izany.
Mihoatra ny 100 tapitrisa isan-taona ny karatra SIM lafo ao Rosia, araka ny antontankevitra avy amin'ny ACM Consulting. Nanombana ny mpampihatra lalàna fa farafahakeliny dia 1,5-2 tapitrisa isam-bolana amin'ireo nividy tsy nampiseho kara-panondro na famantarana hafa na taratasin-tolotra ifanarahana, no mety eo ampelatan'ny vondron'olona na fikambanana miditra ao amin'ny asan-keloka bevava na extremista.
Etsy ankilan'izany, ny tsy maintsy handraketana ny mombamomba ny olona tsirairay te-hampiasa tolotra finday novidiana mialoha sy ny fanovanana ny famerana amin'ny fahazoana tolotra finday dia mandray anjara amin'ny fihenan'ny sehatra manokan'ny fanafenana anarana sy ny fahalalaham-panehoankevitra ao amin'ny tontolon'ny fifandraisana rosiana. Ohatra hafa amin'ny fiezahan'ny fanjakana rosiana hanara-maso ny fifandraisana ihany koa ny fitakiana taratasy mari-panondroana ny tsirairay amin'ny fampiasana tambajotra Wi-Fi hoan'ny daholobe sy ny rejisitra manokana hoan'ireo bilaogera rosiana malaza.